Maleeshiyaad ka tirsana Al-shabaab oo isu soo dhiibay dowladda |
Maleeshiyaad ka tirsana Al-shabaab oo isu soo dhiibay dowladda
Maleeshiyaad ka tirsanaa mintidiinta Al Shabaab ayaa la sheegay inay isku soo dhiibeen Saraakiisha ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku sugan Degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha hoose.
Maleeshiyaadka isu soo dhiibay ciidamada dowlada oo ka koobnaa 11 ayaa ka faa’iideystay cafiska Xukuumadda Soomaaliya ay ufidisay dhalinyarada ka tirsan Ururka Al Shabaab, maadaama Dowladda Soomaaliya ay siisay dhalinyarada inay ka faa’iideystaan cafis dhan muddo 45-cisho ah.
Guddoomiyaha Degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha hoose, Maxamed Xaaji Cusmaan (Gaagaale) ayaa sheegay in raggan ay isa soo dhiibeen iyaga oo fara maran oo aanan wadan wax hub ah sida uu yiri.
Markii ay la kulmeen dhalinyaradaasi Saraakiisha ciidanka oo la wareestay, ayaa waxa ay sheegeen inay adag tahay in maleeshiyaadka ka tirsan Al Shabaab ay hub lasoo goosataan, maadaama si adag loo koontaroolo dhalinyarada ka tirsan Al Shabaab ee hubka haysta, marka ay baxayaan ama dhaq-dhaqaaq ay sameenayaan.
Ragan la sheegay inay isku soo dhiibeen Saraakiisha ku sugan Degmada Qoryooleey, ayaa hadda ku sugan Magaaladaasi, waxaana maamulka uu sheegay in maalmahan dambe ay sii kordhayaan dhalinyarada ka tirsan Ururka Al Shabaab ee kusoo biireysa dhanka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha hoose C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii) ayaa sheegay shalay inay isa soo tarayaan dhalinyarada kasoo baxsanaysa dhanka Ururka Shabaab ee kusoo biireysa ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya.